Pokémon GO 0.147.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.147.1 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
NEW! GO မကြာသေးမီက GO လျှပ်တစ်ပြက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်မတိုင်မီ-ပိုကီမွန်ဒါဟာဘယ်တော့မှကဲ့သို့သင်တို့အပိုကီမွန်နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့အချိန်ပဲ! AR ဓါတ်ပုံများရိုက်ခြင်းကဤလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကို update ကိုနှင့်အတူလျှပ်တပြက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျယခုသင်သည်သင်၏စုဆောင်းခြင်းရှိဆိုပိုကီမွန်၏ဓါတ်ပုံများကိုယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသို့မဟုတ်သင့်မော်ကွန်းခရီးတစ် memento အဖြစ်ဝေမျှဖို့သင်အကြိုက်ဆုံးပိုကီမွန်၏ဓါတ်ပုံများကိုယူပြီးအားဖြင့်သင့် Adventures မှတ်တမ်းတင်။
- ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2019 အဖြစ်ပြန်ကြားရေးကလက်ရှိ
apps-me စတိုး 53.99k 16.91M
APK ဗားရွင္း 0.147.1
Release date: 2019-06-28 04:19:46